Nookiyaan Tajaajila kominikeeshinii telee 4G fi 5G Ityoophiyaatti diriirsuufi – Fana Broadcasting Corporate
Nookiyaan Tajaajila kominikeeshinii telee 4G fi 5G Ityoophiyaatti diriirsuufi
Finfinnee, Onkololeessa 5, 2012 (FBC) – Nookiyaan Tajaajila kominikeeshinii telee 4G fi 5G Ityoophiyaatti diriirsuuf qophii ta’uu ibsame.
Dhaabbatichi Yuunvarsiiti Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinnee fi Inistiityuuti Infoormeeshiin Teeknooloojii Finfinnee waliin hojii diijitaalii fi dandeetti waa uumuu gabbisuuf waliin hojjechuuf kan dandeessisu waliigaltee mallatteessaniiru.
Waliigalticha preezdaanti Yuunvarsiiti Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinnee Dooktar Darajjee Ingidaa fi Inistiityuuti Infoormeeshiin Teeknooloojii Finfinnee bakka bu’uun Dooktar Injiinar Isaayyas Gabra Yohaanniis akkasuumas itti waamamaa Nookiyaa giddugala Bahaa fi Baha Afrikaa Daani’eel Jaagar mallatteessaniiru.
Ministiri Inooveeshinii fi Teeknooloojii Dooktar Geetaahuun Makuriyaa qabeenyi addunyaa kanaa ballinaan damee Inooveeshinii fi Teeknooloojii maddee waan argamuuf dorgomaa ta’anii argamuuf humna namaa oomishuu irraa eegaluun damichaa irratti carraa hojii uumuuf ityoophiyaa hojiiwwaan hedduu hojjechaa jirti jedhaniiru.
Sirnicha irratti kan argamaan tumsaa misooma Fiinlaandii fi Ministirin Daldala Alaa Vaalii Iskinaar abbootiin qabeenya Fiinlaandi carraa haaraa Ityoophiyaatti uumamaanitti fayyaddamuun dameewwaan garaagaraa irratti akka hojjetaniif ni hojjenna jedhaniiru.
Nookiyaan bara Faranjoota 1865 Fiinlaandi magaalaa Heelnisiiki kan hundaa’e dhaabbata Teeknooloojii yoo ta’u, bara faranjoota 2018 dhaabbatichi tajaajilamtoota biiliyoona 6.1 ol, galii doolaara biiliyoona 22.56 fi hojjettoota kuma dhibba 1 fi 3 dhaabbata qabudha.